Hiriirtonni dhibbaan laka’aman Brazil waltajjii Rio de Janeiro biilsa mootumaa fuullee kaleessa hiriiruu dhaan yakka poolisiin uummata ganda hiyyeeyyii gurraachota lmmiiwwan Brazil kan Favelas jedhamuun beekamu keessatti raawwatu balaaleffataniiru.
Hiriirtonni kun dhaadannoo ennaa ajjeechaa George Floyd poolisiin raawwatame jedhe kan hafuura baafachuu hin danda’u jedhe irra deebi’uun dhageessisaa turan. Hiriirtonni kun akka jedhanitti kan nuti as jirruuf sababaan jiraachuu barbaanna. Kan nuti asitti hiriirreef fixiinsa mootummaan nu irratti raawwatu nu waan nu uffisiiseef kana booda hin ga’a jechuufi jedhan.
Hiriirtonni kun dhaaadannoo nu ajjeesuu dhaabi, Faaveelaan nageenya barbaada jedhu qabatanii turan. Caamsaa 18 gurbaa gurraaha umuriin wagga 14 weerara poolisiin Faveelaas keessatti gegeessameen ajjeefame. Joao Pedro Pinto poolisiin mana isaa cabsanii dawaa sammuu adoochuu kanneen deddeebisan barbaaduu maqaa jedhuun ennaa ol seenanitti itti dhukaafamuun ajjeefame.
Bara 2019 Riyoo keessaa poolisiin Brazil ennaa weerara poolisiin geggeeffametti namoota 1,546 ajjeese.